Good Self Dheelitirka mooto Iyadoo APP - Jomo Technology Co., Ltd
Waxaa jira hoverboards badan oo aan ruqsadda haysan waxaa laga heli karaa suuqa, iyo waxaad jeceshahay in aad si loo hubiyo in aad leedahay doonaa mid ka mid kaas oo ah amaan in la raaco adiga ama carruurtaada waayo. Hoverboards Kuwanu waa ka shirkadaha gebi ahaanba kala duwan ee size iyo qaab kala duwan la heli karo si ay u buuxiyaan baahiyaha qofka. Ku hadla gudahood segway hoverboard waxaa encased in carbon ah fible daboolay bannaanka. Hel baahan yahay hoverboard aad mootooyinka korontada isku-dheelli ee aad marinkeeda by amro ka our doorashada waaweyn, Koowheel E1 waa ka weyn yahay a mooto dhaqanka korontada.
Marka hore, waxa uu ahaa macay design moodada Cusub oo qabow by Koowheel.
Marka labaad, waxa ay leedahay Free APP si ay u qoraan iyo wadaagno safar kasta, la beddelo goobaha.
Mar saddexaad, LED screen bandhigay gebi tuso batari iyo xawaaraha. All of sifooyinka kuwanu waa wanaagsan ee carruurta iyo dadka waaweyn. wax soo saarka Tani waa hoverboards ugu weyn in aan abid laga helay iyo yimaado la muuqaalada cajiib ka dhigaya ku haboon ay gool. Ka dibna, waxaan falanqeeyay hoverboards u bixiyaan go'aamada ugu wax ku ool ah.
Inta badan hoverboards Mini Segway leeyihiin xawaare iyo miisaanka kala duwan. Isagoo ka hadlayay ku saabsan xawaaraha iyo in kala duwan ee hoverboard ah, this mid ka mid ah uu soo bandhigayaa xawaaraha max 22KM / h a. Waxaa suurto gal ah ku shuban laga yaabaa 80-100kg culeys on. Gaadiidka gaarka loo leeyahay oo hadda noqonayaa xiiso leh oo dheeraad ah iyo isu la hordhaca ah ee mootooyinka is miisaamid/ hoverboards . Cilmi waa u saaxiib ah kama dambaysta ah ee Insi in uu wanaajinta-style nolosha iyo siinta fursado dheeraad ah in la ogaado brand arrin cusub oo dunida ku tallaabo kasta.
On this Self Dheelitirka Gaadhi curyaanku guudmar web site, waxaana lagu helay in dib loo eego, kuwaas oo iibiya oo laga yaabo in la isku hallayn iyo bixiyaan loox oo tayo fiican leh. Faashiyoonadi ilaaliyo xilligan waxaa soo socda mar kale la heli karo suuqa. Weecinno bidix ama ku haboon inuu ka soo leexdo, ama inayna dib ugu noqonaynin. Mootooyinka ayaa lagu iibin guryaha si gaar ah qofka loogu talagalay isticmaalka of kids. Si kastaba ha ahaatee, ka fikirkaygana shakhsi, fursadaha qaar ka mid ah waxa ay kaa caawin in ay qof u baahan, laakiin dhammaantiin ma aha iyaga ka mid ah waxaa laga yaabaa. Qof kasta oo ka hooseeya in, iyo iibsadaha iska jira - sidoo kale noqon kartaa in aad u nugul in ay iibsato liin ah. Update CUSUB: Iska jira iibsashada jaban sameeyey knockoffs Koowheel! Halka qaar ka mid ah mootooyinka isku dayaan inay hubiyaan nabadgelyadaada by siinaya hab miisaamid mataano ah, laga yaabaa in aad rabto in aad si loo hubiyo ammaanka sii. Haddii aad dareento in aad ganacsi ka maqan in vibe casri ah, waxaa laga yaabaa in aad si fudud u beddeli in aan soo iibsano labadoo ee mootooyinka isku miisaamida. Waxaad xitaa u yaqaaniin laga yaabaa geesood xawaare aad u xad-dhaaf ah ay dhacdo inaad la baro si fudud khuseeya in dhinac.